I-akhawunti ye-Hack Media Media Easy kwaye yasimahla - Hackear-Cuenta.com
Khetha inethiwekhi ofuna ukuyiqhekeza.
Iprofayile okanye iAkhawunti ayichanekanga. Ukuba ufuna uncedo, ungaqhagamshelana nathi.
Qinisekisa kwaye Khuphela idatha
Le profayile ayisebenzi. Iprofayile inokuba yabucala, okanye ibivaliwe, inqunyanyiswe, icinyiwe okanye ayikho!
Ngaba uyafuna ukuqhubeka nokuqhekeza le profayile?
Ukuba ufuna ukwazi ukuba ungayiqhekeza njani iakhawunti ukwindawo elungileyo, nokuba sisiphi na isizathu esiqhuba isigqibo sakho, siya kukufundisa indlela hack i-akhawunti nayiphi na yenethiwekhi yoluntu simahla ngokupheleleyo, ngaphandle kwenkqubo kwaye ngaphandle kovavanyo.
Ukutyhubela iminyaka siye saphuhlisa isoftware ekwi-intanethi elula kakhulu, i password generator oko kuya kukubonelela ngedatha oyifunayo kumntu oza kungena kunye negama lokugqitha kunye negama lomsebenzisi.
Zininzi iindlela ezinokwenzeka zokufikelela kwiakhawunti yomntu ngaphandle kokuba negama eliyimfihlo, kwaye ungayenza nje ukwazi inombolo yakho yefowuni okanye idilesi ye-imeyile.
Okwangoku kwaye sibulela kuphuhliso lwetekhnoloji, idatha yobuqu inokufikeleleka ngokulula, nokuba ngolunye uhlobo lwenkqubo okanye ngokuzalisa uphando; apha siyakufundisa indlela my facebook ngaphandle kwenkqubo kwaye ngaphandle kovavanyo, simahla kunye ne-100% kwi-intanethi.
Uyenza njani iakhawunti ye-WhatsApp
Ukuba ufuna ukufikelela kwisicatshulwa, iaudio, ividiyo kunye nemiyalezo yefoto ethunyelwa emntwini nge-WhatsApp, kuyenzeka ukuba wenze njalo enkosi kwikhowudi yethu yejeneretha eya kukuvumela. ube nofikelelo kwiakhawunti yakho simahla.
Ngokulandela nje amanyathelo ambalwa uya kukwazi my WhatsApp ukuba nje inombolo yefowuni yomntu kunye ne-akhawunti edibeneyo, ilula kakhulu kwaye inokwenziwa kwimizuzu embalwa.
Uyenza njani iakhawunti ye-Instagram
I-Instagram yenye yezona nethiwekhi zentlalo zidumileyo kwimarike., inesistim yemiyalezo yabucala apho abasebenzisi banokunxibelelana, ngokuchitha ixesha elininzi kule intanethi yentlalo, umntu unxibelelana kakhulu ngolu hlobo.
Sikufundisa indlela yokwenza ijenereyitha yethu ikunike isitshixo sokuqhekeza i-instagram de ifomu ye-intanethi, ngaphandle kwenkqubo kwaye ngaphandle kophando ukuze ube nokufikelela kwidatha yomntu, kwimizuzu embalwa.
Uyiqhekeza njani iakhawunti ye-Twitter
Uyakholwa okanye awukholwa, i-Twitter iseyenye yezonxibelelwano zentlalo enabaphulaphuli "bokwenyani" ngokutsho kwabo, ngoko ke umntu osebenzisa i-Twitter uzibonakalisa esidlangalaleni ngaphandle kwe-taboos kwaye ucinge ukuba anokuthetha ntoni kunye nabani intetho. ngomyalezo wakho wabucala.
hack twitter nge I-portal yethu yewebhu ilula kakhulu, ngaphandle kwenkqubo ethintela ukusebenza kwekhompyuter yakho kwaye ngaphandle kovavanyo oluthatha ixesha lakho uyenza, simahla.
Uyenza njani iakhawunti ye-Snapchat
I-Snapchat yinethiwekhi yoluntu ephucukileyo kwaye isebenza njengesicelo sokuthumela imiyalezo ngoko nangoko onokuthi uthumele iifoto okanye iividiyo ezihlala ixesha elithile kwaye bayayibona. kuphela abo ufuna ukufikelela kuzo.
Ukuze ukwazi hack snapchat akhawunti solo ufuna igama lomsebenzisi kunye nenombolo yefowuni, ngale ndlela umvelisi wethu wephasiwedi uya kukunika ukufikelela kwenye ukuze ukwazi ukufikelela kuyo ngemizuzu embalwa.
Uyenza njani iakhawunti yeTikTok
Oku ngaphandle kwamathandabuzo sesona sicelo sevidiyo esikhutshelweyo emhlabeni kwaye, kwezona zininzi enkosi ethandwayo kwinani labasebenzisi abayisebenzisayo hack tiktok ufuna nje inombolo yefowuni edityaniswe kwi-akhawunti kunye negama lomsebenzisi.
I-TikTok inenkqubo yokhuseleko ekulula kakhulu ukuyiqhekeza kwi-intanethi, ukuze ukwazi ukugqekeza nayiphi na iakhawunti kwimizuzu.
Uyiqhekeza njani uMthunywa
Messenger isicelo esiyinxalenye Facebook, izigidi adibane kwakhona ngokusebenzisa le network yoluntu kunye Nxibelelana ngale ndlela yokuthumela imiyalezo yabucala, ke unokuqiniseka ukuba unencoko rhoqo kuMthunywa.
Hack Messenger es ilula kakhulu enkosi kwi-generator yethu engundoqo, ngale ndlela ungayenza ngaphandle kophando, ngoko awuyi kuchitha ixesha elininzi uphendula imibuzo edinayo kwaye ngaphandle kwenkqubo eyenza idatha yakho yobuqu kunye nekhompyuter ibe buthathaka.
Uyenza njani iakhawunti yeNetflix
Netflix iye yaba a portal ukubukela iimuvi kunye nothotho ithandwa kakhulu, kuba ilawula ukuhamba okukhulu kwabathengi ngenxa yokuthuthuzela kunye nokulula kweqonga layo lokufikelela kumxholo wayo.
Ukuba ufuna ukuba neakhawunti yasimahla, siyakufundisa hack iNetflix ngokupheleleyo kwi-intanethi, ukuze ukonwabele uthotho olungcono kunye neemuvi kwimizuzu nje, ngale ndlela uya kuba negama lomsebenzisi kunye negama lokugqitha ukufikelela nanini na ufuna.
Uyenza njani iakhawunti yeSpotify
Esi sesinye sezicelo ezithi iye yakhula ngakumbi kumaxesha akutshanje, ekubeni ukumamela ukusasazwa komculo, iipodcasts kunye nokunye kunokwenzeka ngenxa yeSpotify, kodwa kukho abo bangenako ukuba neakhawunti yePremium.
Siyakufundisa hack Spotify kwimizuzu embalwa, ngokusebenzisa ijeneretha yethu engundoqo ukuze ukufikelela kwimizuzu nje ngokupheleleyo kwi-intanethi.
Uyenza njani iakhawunti yeGmail
I-Gmail yenye yezona akhawunti zidumileyo nezisetyenziswayo ze-imeyile ngabathengi, ngoko ke ukugqekeza iakhawunti yeGmail kuluncedo kakhulu ukuba ufuna ukufikelela kwidata yobuqu nangaphezulu kunomntu.
hack gmail kunokwenzeka enkosi ku ukuba siyila inkqubo engadingi ixesha elininzi lokukhupha idatha eyimfuneko kwaye ufikelele kwi-imeyile yomntu.
Uyenza njani iakhawunti ye-hotmail
Enye yeeseva ze-imeyile ezidumileyo kwimarike yiHotmail, kwaye le domain kulula ukuyiqhekeza kwiwebhusayithi yethu, ngaphandle kophando kwaye ngaphandle kwenkqubo ukuze ube nesitshixo kwimizuzu embalwa.
Unako hack hotmail simahla ukunika nje iinkcukacha zobuqu zexhoba kwaye kwimizuzu embalwa uya kufumana ngokulula igama lokugqitha lokungena kwakho.
Uyiqhekeza njani i-Wi-Fi
Uqhagamshelo lwe-intanethi olungenazingcingo phantse lunyanzelekile kwezi ntsuku, njengoko ukuqhekeza kwinethiwekhi ye-Wi-Fi kuye kwaba nzima kakhulu. luncedo njengoko iqhosha lofikelelo lihlala litshixiwe.
Ukuba ufuna hack wifi ungayenza kuphela ngegama lenethiwekhi ofuna ukuqhagamshela kuyo kwaye isixhobo sikufutshane nokukhutshwa kophawu ukuze unokufikelela ngokulula kwaye ngaphandle kweengxaki ezininzi.
Sele uyazi ukuba kuyenzeka ukuba igqekeze nayiphi na iakhawunti kunye nakweyiphi inethiwekhi yoluntu oyicebisayo ukuba ukwindawo elungileyo, ke sicebisa ukuba ukhusele amagama ayimfihlo kunye nedatha yakho yobuqu kangangoko kunokwenzeka.
© 2022 Hackear-Cuenta.com · Onke amalungelo agciniweUMgaqo-nkqubo weKuki Ngathi?